Ğgbọ njem Babadağ iji ụgbọ elu site na Cable Car - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara AegeanLelee Nzuzo zuru ezu 48Njem Nnukwu Babadağ iji ụgbọ elu site na Cable Car
Njem Nnukwu Babadağ iji ụgbọ elu site na Cable Car
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş Lelee Nzuzo zuru ezu 48, Mpaghara Aegean, General, Turkey, TELPHER 0
njem babadag ga-efegharị site na ụgbọ ala USB
A ga-etinye Fethiye-Babadağ Egwuregwu Ikuku na Ntụrụndụ, otu n'ime ebe ndị kachasị ewu ewu na ụwa, a ga-arụ ọrụ na njedebe nke afọ na-esote.
A ga-etinye Fethiye-Babadağ Egwuregwu Ikuku na Ntụrụndụ, otu n'ime ebe ndị kachasị ewu ewu na ụwa, a ga-arụ ọrụ na njedebe nke afọ na-esote. Ihe omume 200 million TL Babadağ Cable Car project na-erute njedebe. cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ámá egwuregwu, ọgbọ egwuregwu, keakamere ọdọ mmiri na Turkey na ụwa kasị mkpa Air Games na mgbanwe nke ọnọdụ maka ọpụpụ ojii na Babadag Recreation Center na-atụ anya na-ada tupu ikike.
Pịa ka ịgụọ ihe ndị ọzọ site na narị afọ ọhụrụ
Nkọwapụta oru ngo nke Babada Car Cable Car
Enwere ike ilele nnụnụ anya nke Babada Cable Car n'isi Muğla Fethiye, Dalaman, Seydikemer na Antalya. Na mgbakwunye, a pụrụ ịhụ agwaetiti Rhodes dị na Gris site na nchikota. Ebe mbido ụgbọ ala USB, nke a ga-adị na mkpọda ọdịda anyanwụ nke Babadağ, bụ n'okporo ụzọ Yasdam na mpaghara Ovacık. Oge njedebe a ga-adị n'akụkụ akụkụ ọsọ 1700 mita na nnọkọ Babadağ. Site na mbido ụlọ dị iche iche nke mejupụtara ikike mmadụ 8, ndị ọbịa ga-erute ọdụ etiti na egwu nke 1200 mita ma si ebe ahụ, ha ga-erute akara mita mita Babadağ 7 n'ihe dị ka nkeji 1700. Accessnweta mita 1800 na 1900 ga-ekwe omume site na sistemụ oche. Ihe oru ngo a tinyekwara ogbe nri na ileba anya na ihe omimi na mita 1900 na 1700.
Alan Cable ga-eme njem njem na Alanya 15 / 05 / 2017 Alan Cable Car ga-eme njem nlegharị anya Alanya: Ọnụ ọgụgụ amalitela maka Alanya Cable Car nke ga-eme ka njem nleta Alanya ọhụrụ. Otu n'ime ọrụ ndị kacha mkpa Alanya Mayor Adem Murat Yücel ga-ewetara Alanya, ndị na-akwọ ụgbọala na ngwá ọrụ nke ụgbọ ala ụgbọ elu gbakọtara na helikopta Russia ka ha wee ghara imerụ ahụike nke Alany Castle nke UNESCO. YUCEL: OL BAYRAM GOD AYR Ihe Alanya Ropeway Project, nke na-efu 9 nde Euro, ka agwụla ma tinye ya na June. Alanya Mayor Adem Murat Yücel kwuru, sị, "Anyị ga-emechi afọ 30 nke Alanya nke na-achọsi ike ma mepee ya tupu ezumike ụbọchị Ramadan ma enwere m olileanya na anyị ga-enye ya ụmụ amaala anyị onyinye onyinye ezumike ..."
Babadag ga-efe ụgbọ ala 08 / 05 / 2017 Na Babadağ Cable Car Project ka agwụchaa na njedebe nke 2018 na Fethiye, a na-atụ anya na ndị na-eme njem elekere 500 ga-arị elu elu nke elu 1965 kwa afọ. Site na nzuko ahụ, nke gosiri dịka ọnụ ọgụgụ nke otu ogige dị na Europe, anya anya nnụnụ nke Muğla's Fethiye, Seydikemer, Dalaman na Ortaca na ógbè Kaş Antalya nwere ike ịhụ na Rhodes Island nke Gris nwere ike ịhụ. A na-enye obi ebere maka Babadağ Cable Car Project na April na Kırtur Limited Company wee merie. Ebumnuche 30 nde dollar ka ezubere ka agwụchaa na njedebe nke 2018. 6-7 NA SUMMIT NA MINUTE Ebe ntanetị nke ụgbọ ala nke a ga-etinye na ndagwurugwu ọdịda anyanwụ nke Babadağ bụ na Yasdam Street na ebe njedebe bụ mgbasa ozi 1700
ILGAZ TUNNEL GA-EKPE ANKARA N'UGU 29 / 07 / 2013 E nwetawo ọganihu 2 kilomita na abụọ tunnels n'okpuru ewu na Ilgaz Mountain n'etiti Çankırı na Kastamonu. Ọwara ga-eme ka ebe dị anya n'agbata Ankara-Kastamonu 30 nkeji ga-eme ka osimiri nke İnebolu na Cide nso n'isi obodo ahụ. Mmiri ahụ na-ewu na Ilgaz Mountain ga-eme ka isi obodo ahụ dị nso n'akụkụ osimiri dị iche iche nke Kastamonu. Na njedebe nke ọdọ mmiri ahụ, osimiri dị iche iche nke Inegöl na Cide districts nke Kastamonu ga-amalite ime n'etiti ụzọ mgbapụ nke izu ụka nke isi obodo. Ebe dị na ebe ebe Streams Devrekâni na-asọba n'Oké Osimiri Ojii, mara Gideros Bay, nke bụ otu n'ime echiche mara mma nke ọdịda anyanwụ. TUNNEL REVIEW Çankırı Gọvanọ Vahdettin Özcan, AK Party Çankırı ...
Igwe Ngwá USB BalNova 5 ka mepee ọhụụ ọhụrụ n'April 04 / 04 / 2016 Balçova Teleferik 5 ga-emeghe oge ọhụrụ n'April: A ga-emezigharị na Izmir. Ụgbọ ala Balba Ga Car, ọrụ site na İzmir Obodo ukwu nke afọ gara aga, enwebeghị ike ije ozi ebe ọ bụ na February na-eme ka 29 kwa afọ na-arụ ọrụ tupu oge. Emezi, nke ekwuputala na mbụ ka ọ kwụsị na 31 March, agbatịwo site na 4 ụbọchị maka iwu njikwa. Igwe ụgbọ ala ga-amaliteghachi na Tuesday, April 5. Igwe Baldova Car Nrụ ọrụ 41 wuru na 1974 afọ gara aga. Ulo oru nke ndi Izmir na-ejere ndi Izmir ruo otutu afo akwadebewo nke ulo oru ulo oru ndi nkomasi Izmir na akuko na o di nkpa na nyocha na ojiji nke ejiji, 2007 afo November ...
TCDD Izmir Ọrụ Port ga-ebudata Igbe E Si Nweta Ugbo Ala ka Ikwenye Ụgbọ mmiri 03 / 04 / 2012 Oge a, ihe ngwọta nke ihe isi ike na-enweta na Alsancak Port n'ihi na ụgbọ mmiri 4 ga-abata Izmir n'otu oge ahụ. E kpebiri imeghe ụgbọ mmiri ndị na-ebu ụgbọ mmiri, ebe ụlọ ọrụ ụfọdụ kwetakwara ime mgbanwe na ụbọchị njem. Oge a n'otu oge 4 ụgbọ mmiri na Izmir n'otu oge n'oge nsogbu Alsancak Harbour ka edozila. Ndị ọzọ zukọtara na nzukọ a na TCDD İzmir Port Authority ma kpebie ime ihe niile iji gbochie ụgbọ mmiri iji pụọ na oge 2012. N'ihi nzuko nke 1.5 hour-ogologo, ndị isi ụgbọ mmiri kpebiri imeghe ụgbọ mmiri maka ụgbọ mmiri. Ụfọdụ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri v v
Marmaray ga-emeghe ọnụ ụzọ nke Europe na China 27 / 05 / 2012 N'okpuru Bosphorus ikpeazụ a Train Road, East Gate na Turkey, Door Openers maka Europe ka China. Ankara na Beijing, na geopolitical nguzozi na mgbada Union Oluşturuyor-- Bosporus ọwara na-agafe n'okpuru ụgbọ okporo ígwè na Play a Ọrụ "Marmaray" na oghere ememe nke Republic of Turkey, 90. Na ụbọchị ncheta nke nhazi ya, a ga-eme 29 na October 2013. Turkey si Prime Minister Recep Tayyip Erdogan mgbe o letara oru ngo na otu n'ime ebe ndị ahụ, na-acha ọcha na-echebe okpu agha na oroma agba, a mpako ụzọ a na-egosipụta na reflective Jaketị, a oru ngo, "ígwè silk ụzọ" a kọwara n'elu dị ka akụkụ kasị mkpa nke na. Turkey si mba ọzọ ozi Ahmet Davutoglu, dị ka "akụkọ ihe mere eme edemede", ...
Usoro uzo okporo uzo ga-eme ka uzo maka ugbo nke ugbo 04 / 07 / 2012 Ministry Mehdi Ika nzukọ na ụlọ, ke kpuchie nke nleta Azerbaijan Prime Minister Artur Rasizade ụnyaahụ na taa, a ga-ama na Minister nke Agriculture Ismet Abbasov'la kwuru na Azerbaijan mere nnọọ uru mkparịta ụka na nkwonkwo ọrụ. Azerbaijan na Turkey Ika kwuru na mmekọahụ na a elu larịị na nke a na gburugburu ebe obibi, mmegwara mgbanwe nke ihe ọmụma, na nkwonkwo investments na gwara otú ha na-arụ ọrụ na ga-eme ka mmepe nke mba abụọ site na mmepe nke ahia. Na 2011 2 ijeri, na-egosi na 300 nde dollar nke ahia n'etiti mba abụọ mere Ika, òkè nke mba nke a ọnụ ọgụgụ, usoro onodi azuma ahia, o kwuru na ya bụ nnọọ obi umeala na mmachi Ịtụle aku ike. ...
Ịrụcha ụgbọ okporo ígwè BTK ga-emepe ụzọ maka Kars 24 / 07 / 2012 AK Party osote onye Ahmet Arslan Kars, na BTK Project Monitoring nchikota Council nke Ozi nzute 4. Nzute iji nweta Georgia ikwado Kars-Ahalkalaki ọwara na ókè-ala na Turkey, ọ sịrị ndị ọhụrụ ndibiat ga-eme. Deputy Ahmet Arslan; "Baku-Tbilisi-Railway (BTK) ga-agwụ agwụ tupu ufiop mgbalị e mere iji mee ngwangwa ngo na biya. BTK dị ezigbo mkpa maka Kars. N'ihi na ụgbọ okporo ígwè ga-agwụ agwụ site na njedebe nke n'ihu Kars. Kars ga-abụ nzọụkwụ n'ihu na mbipụta ọ bụla. Railway lọjistik Centers ga-agwụ agwụ ke ukem. Na-enweghị ọrụ nsogbu ga-edozi Kars. Na nke ọ bụla, a ga-etinye ego na Kars. N'echiche a, Kars dị ezigbo mkpa. Na Yunus Bey birlikte
InnoTrans 2012 - Okporo ụzọ okporo ụzọ na-emeghe ụzọ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ụwa na Berlin 21 / 09 / 2012 N'afọ a, ụwa ụgbọ okporo ígwè oru otu ugboro ọzọ na Germany ga-izute na isi obodo nke 18-21 nke na-eduga mba ahia ngosi maka okporo ígwè iga technology na September, ga redefine ọkọlọtọ maka ọdịnihu nke agagharị. The ahia ngosi, nzuko na a pụrụ iche Nchikota n'èzí n'ihu site n'ihe a merenụ na-a nnọọ nnukwu oru òkè na-emesi obi a na mbụ na-enwetụbeghị ụdị larịị nke ọma. N'ihi na oge mbụ na InnoTrans ngosi ohere 26 2012 n'ebe onye ọ bụla ulo jupụtara ugbu a n'ezie n'obosara, nke na-egosipụta oké mmasị na ngosi. InnoTrans na-egosiputa Ntughari na Rail Transportation Ray
Ụzọ Gaziantep Light okporo ụzọ ga-emeghe 16 / 11 / 2012 Ụzọ Gaziantep ìhè okporo ụzọ okporo ụzọ ga-emeghe okporo ụzọ usoro okporo ụzọ okporo ụzọ na ikuku isi na-eme ka ọdịdị ahụ dị mma. Metropolitan Municipality site LRT ụzọ, nrutu na-agafe agafe ịgafe ihe na-kere ke iche iche geometric aghụghọ na-rụrụ na ebe ndị ọkụ usoro. The kwuru ihe ndị na ụzụ Affairs Department, 'Karatas na Zodiac Mgbanwerịta si inyịme na-amalite Station Square LRT ụzọ on nkwụsị oyi oge mgbanwe site n'oge a kara ifuru akuku ọrụ a na-eme' gosipụta. ... Na ebe ebe okporo ụzọ okporo ụzọ na-akwụsị na ọrụ okooko na ụzọ lı
Egwuregwu ikuku na ebe ntụrụndụ Babadağ
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 nke entallọ Ọrụ Oriental
Alan Cable ga-eme njem njem na Alanya
Babadag ga-efe ụgbọ ala
ILGAZ TUNNEL GA-EKPE ANKARA N'UGU
Igwe Ngwá USB BalNova 5 ka mepee ọhụụ ọhụrụ n'April
TCDD Izmir Ọrụ Port ga-ebudata Igbe E Si Nweta Ugbo Ala ka Ikwenye Ụgbọ mmiri
Marmaray ga-emeghe ọnụ ụzọ nke Europe na China
Usoro uzo okporo uzo ga-eme ka uzo maka ugbo nke ugbo
Ịrụcha ụgbọ okporo ígwè BTK ga-emepe ụzọ maka Kars
InnoTrans 2012 - Okporo ụzọ okporo ụzọ na-emeghe ụzọ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ụwa na Berlin
Ụzọ Gaziantep Light okporo ụzọ ga-emeghe
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (285) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (619) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (518) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (665) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)